विषादीयुक्त तरकारी–फलफुल प्रवेशमा तत्कालै कडा परिक्षण गर्न कांग्रेसको माग - नेपालबहस
विषादीयुक्त तरकारी–फलफुल प्रवेशमा तत्कालै कडा परिक्षण गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं। सरकारले सीमा बिन्दुमा आयतित तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएपछि कडा आलोचना भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार आफ्नै निर्णयमा अडिग रहन नसेको भन्दै ‘महान प्रदुषण भरिएको शहरमा मास्क नलगाई हिंडौं ! तर विषादीयुक्त तरकारी खाएर‘ सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको महान रास्ट्रवादको गुणगान गाउंदै हिंडौं ? भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
स्मरण रहोस प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले आफुलाई ‘महान राष्ट्रवादी’ मान्छन् । चुनावताका आफु राष्ट्रवादी अरु सबै भारतपरस्त भन्ने उनको भनाइ रहने गथ्र्यो ।
जारी विज्ञप्तमिा कांग्रसेले विषादी परीक्षणलाई निरन्तरता दिनसमेत माग गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नागरिक जीवन माथि खेलवाड गर्ने गैह्र जिम्मेवार सरकारको भत्र्सना गर्दै नेपाली कांग्रेस विषादीयुक्त तरकारी–फलफुल प्रवेशमा तत्कालै कडा परिक्षण र नियन्त्रणको मार्गमा उभिन सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।’
नागरिक जीवन माथि खेलवाड
अघिल्लो लेखपिपलको पातमा ‘पानी देऊ, देऊ’
अर्को लेखअंग्रेजी सुधार गर्ने १०० वटा अनौठो तरिकाहरु – भाग ८
नेविसङ्घमा विधानअनुसार तदर्थ समिति बनाउन माग, समिति नआए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्री ज्यु दृढ़ पहल होस्, हामी साथमा खडा छौ : कांग्रेस प्रवक्क्ता शर्मा
उपनिर्वाचन २०७६ : नेकपा र कांग्रेसले लगाए उम्मेदवार टुङ्गो
एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्न जरुरी छ : कांग्रेस सहमहामन्त्री महत
उपनिर्वाचन २०७६ : वाम तालमेल, कांग्रेसलाई चुनौती